Yintoni iOrganic SEO? | Martech Zone
Yintoni iOrganic SEO?
NgoLwesihlanu, Matshi 7, 2014 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Ukuba ufuna ukuqonda ukusebenza kweinjini yokukhangela, kuya kufuneka uyeke ukumamela abo bakushishino abafuna ukungenelwa kulo kwaye ulibilise kwiingcebiso zikaGoogle. Nanku umhlathi omkhulu kwisikhokelo sabo sokuKhangela kwiNjini yokukhangela:
Nangona isihloko sesi sikhokelo sinamagama "injini yokukhangela", singathanda ukuthi kufuneka usekele izigqibo zakho kuqala kwaye eyona nto ilungele iindwendwe zesiza sakho. Ngabasebenzisi abaphambili bomxholo wakho kwaye basebenzisa iinjini zokukhangela ukufumana umsebenzi wakho. Ukugxininisa kakhulu kwii-tweaks ezithile zokufumana inqanaba kwiziphumo zeenjini zokukhangela akunakho ukuhambisa iziphumo ezinqwenelekayo. Ukulungiswa kweinjini yokukhangela imalunga nokubeka olona nyawo lwakho lubalaseleyo phambili xa kuziwa ekubonakaleni kwiinjini zokukhangela, kodwa abathengi bakho bokugqibela ngabasebenzisi bakho, hayi iinjini zokukhangela.
UGoogle uneengcebiso eziqinisekileyo kwi ukuqesha umcebisi wakho olandelayo we-SEO, kananjalo. Ingcebiso yam kubaxhasi ilula… sebenzisa iqonga elinezixhobo uGoogle azenzileyo, kwaye emva koko wakhe, wabelane, kwaye ukhuthaze loo mxholo ngesicwangciso-qhinga esikhulu sentengiso. Oku infographic evela kwi-SEO Sherpa lisibonisa kakuhle esi sicwangciso.
Inqaku elinye koku, i-infographic iyalumkisa ngokuchasene nomxholo ophindiweyo. Umxholo ophindiweyo inokuba ngumcimbi ukuba awusebenzisi amakhonkco e-canonical ukutyhala igunya kwinqaku lokuqala, kodwa akohlwaywa nguGoogle.
tags: esizisebenzelayoukuvalaamaphepha omnyangoukuphinda umxholoGoogle +umbhalo ofihliweyoukugxila igama elingundoqoikhonkco lotshintshiselwanoQhagamshela iifamaikhonkco logaxekileyenziwe seoeziphilayo eziphilayoukuhlawulwa kwezithuba zeblogiamakhonkco ahlawulweyoulungiselelo lweinjini yokukhangelaenjini yokukhangela nounSEOumxholo omncinci
Kutheni amaTyhini engamandla aNgemva kwezeMithombo yeendaba
Ukuphazamisa ukuThengisa ngokuZenzekelayo
Mar 10, 2014 ngo-7: 11 AM
Enkosi ngokwabelana nge-infographics uDouglas! Ishwankathela nje into endiyifunayo malunga nezinto ezisisiseko zeOrganic SEO.
Mar 11, 2014 ngo 9:00 PM
UDouglas, ndiyayithanda kakhulu inqaku malunga nokungazisebenzisi iinjini zokukhangela. Ukudala umxholo olungileyo njengoko i-infograhpics yakho ikhankanya malunga nokwenza umsebenzi wokwenza umxholo obalulekileyo owenza iGoogle yonwabe kodwa okona kubaluleke kakhulu kukonwabisa abafundi bakho. Ekugqibeleni imalunga nabafundi. Bayayithanda kwaye bafumana ixabiso kuyo, bayabuya kwaye bathumele izihlobo zabo. Baninzi abathengisi namhlanje abafundisa ngeendlela ezikhawulezayo ezingenamandla okuhlala. Ulwazi olulungileyo Enkosi ngokwabelana.
Mar 15, 2014 ngo-5: 26 AM
Ekunene kwi @ disqus_3MEg2e280Z: disqus! Ukubeka kwindawo yokukhangela kukudlala ixesha elide kunye nemveliso yokuthengisa umxholo. Zimbalwa (ukuba zikhona) amaqhinga akhawulezayo avelisa iziphumo ze-SEO ezingapheliyo kwiwebhu ye-semantic.
Mar 15, 2014 ngo-5: 12 AM
Enkosi ngokwabelana oku nabafundi bakho uDouglas. Ndiyathemba ukuba baya kufumana ixabiso kuyo 🙂 James ~ SEO Sherpa
Mar 27, 2014 ngo-9: 19 AM
Iposti entle..nokwenyani, yi-organic ye-SEO kuphela ekufuneka ilandelwe njengoko i-SEO eyenziweyo inokukuzisela impumelelo yexesha elifutshane kodwa ayizukuhlala ixesha elide. I-Organic SEO ikulethela iziphumo ezilungileyo ezinde.
Ngomhla wama-2 ku-Disemba 2014 ngo-2: 35 AM
Ngaba iwebhusayithi yakhiwe ngaphandle kokufakwa kwebhodibhodi kunye nomxholo obhityileyo- ngaba yi-organic ye-SEO? Oku kutsha kuthi kwaye lulwazi oluhle kangaka! Ngalo lonke eli xesha, uninzi luye lwangena kwi-SEO eyenziweyo kwaye oku kuyaphaphama, ngakumbi ukuba inyani kufanele ukuba ibeyeyeyeyayo.